I-Biographie ye-Flemish Cartography uGerardus Mercator
UGerardus Mercator wayengumdwebi wezithuthi zeFlemish, ifilosofi kunye ne-geographer owayeyaziwayo ngokudala kwakhe imephu ye- Mercator . Kwi-Mercator ukulungelelaniswa kwebala kunye nobubanzi beemeridi zokukhawuleka kubanjwa njengemizila eqondekileyo ukuze iyanceda ukuhamba. U-Mercator wayeyaziwa nangokuphuhliswa kwegama elithi "i-atlas" ukuqokelela imephu kunye nobuchule bakhe kwi-calligraphy, ukudweba, ukupapasha nokwenza izixhobo zenzululwazi (i-Monmoner 2004).
Ukongeza, uMercator wayenomdla kwimathematika, kwi-astronomy, cosmography, magnetism emhlabeni, imbali kunye nenkolo (i-Monmoner 2004).
Namhlanje i-Mercator icingelwa njengomdwebi webalazwe kunye ne-geographer kunye neprojekthi yakhe yokusetyenziswa kwemephu yayisetyenziswe iminyaka emininzi njengendlela efuna ukubonisa umhlaba. Amaphupha amaninzi asebenzisa ukucwangciswa kweMercator asetyenziselwa eklasini namhlanje, nangona uphuhliso lwendlela entsha, echanekileyo imephu .
Ubomi bokuqala kunye neMfundo
UGerardus Mercator wazalwa ngoMatshi 5, ngo-1512 eRupelmond, County of Flanders (eBelgium yangoku). Igama lakhe ekuzalweni nguGerard de Cremer okanye uKremer (Encyclopedia Britannica). I-Mercator ifomu lesiLatin leli gama kwaye lithetha "umthengisi" (i-Wikipedia.org). UMercator wakhula eDuchy kaJulich waza wafundiswa u-Hertogenbosch e-Netherlands apho wafumana uqeqesho kwimfundiso yobuKristu kunye neLatini kunye nezinye iilwimi.
Ngo-1530 uMercator waqala ukufunda kwiYunivesithi yamaKatolika yaseLeuven eBelgium apho wafunda khona abantu kunye nefilosofi. Waphumelela nge-master's degree ngo-1532. Ngeli xesha, uMercator waqala ukungathandabuzeki malunga nenkolo yezemfundo kuba wayengakwazi ukudibanisa into awayeyifundiswa ngayo ngemvelaphi yendalo yonke kunye ne-Aristotle kunye nezinye iinkolelo zesayensi (Encyclopedia). Britannica).
Emva kweminyaka yakhe emibini ehamba eBelgium ngenqanaba lekosi yakhe uMercator wabuyela eLeuven ngenomdla kwifilosofi nakwijografi.
Ngeli xesha u-Mercator waqala ukufundisisa noGemma Frisius, isazi sezemathematika, udokotela kunye neenkwenkwezi, kunye noGaspar waseMyrica, umbhali kunye negolide. U-Mercator ekugqibeleni waba nemathematika, i-geography kunye nesayensi yeenkwenkwezi kunye nomsebenzi wakhe, kunye neFisius kunye ne-Myrica eyenze iLeuven ibe yindawo ekuphuhliseni ngayo i-globe, iimephu kunye nezinto zeenkwenkwezi (i-Encyclopedia Britannica).
Ngo-1536 u-Mercator wayezibonakalise njengomqambi obalaseleyo, u-calligrapher kunye nomenzi wezinto. Ukususela ngo-1535 ukuya ku-1536 wathatha inxaxheba kwiprojekthi yokwakha ihlabathi lomhlaba kwaye ngo-1537 wasebenza kwihlabathi lezulu. Ininzi yomsebenzi kaMercator kwiiglobe zenziwa ngokubhaliweyo kweempawu kunye nokubhala iicalic.
Kuwo wonke ama-1530 i-Mercator yaqhubeka ikhula ibe ngumdwebi webalaphu kunye ne-globetic globes yasinceda ukuba amise igama lakhe njengegosa-geographer kule nkulungwane. Ngowe-1537 uMercator wadala imephu yeLizwe elingcwele kwaye ngo-1538 wenza imephu yehlabathi kwi-double-shape or cordiform projection (Encyclopedia Britannica).
Ngo-1540 i-Mercator yenzelwe imephu yeFlanders kwaye yashicilela incwadi ebhaliweyo kwi-italic lettering ebizwa ngokuthi, Literarum Latinarum quas Italicas Cursoriasque Vocant Scribende Ratio .
Ngomnyaka we-1544 uMercator wabanjwa waza wahlawuliswa ngenxa yokunyaniseka ngenxa yokungabikho kwakhe kwiLuuven ukuba asebenze kwiimephu kunye neenkolelo zakhe kwiProtestanti (Encyclopedia Britannica). Kamva wakhululwa ngenxa yenkxaso-yunivesithi waza wavunyelwa ukuba aqhubele phambili ekukholiseni izifundo zakhe zesayensi kunye nokushicilela nokushicilela iincwadi.
Ngo-1552 uMercator wathuthela eDuisburg kwiDuchy yaseCleve kwaye wancediswa ekudalweni kwesikolo sograma. Kuwo wonke ama-1550 i-Mercator nayo yasebenzisa uphando lwezobuhlanga kuDuke Wilhelm, yabhala i-Concordance yeVangeli, kwaye yabhala ezinye izinto ezininzi. Ngo-1564 uMercator wadala imephu yeLorraine neBritish Isles.
Kwi-1560 i-Mercator yaqala ukuphuhlisa nokugqibelela imephu yakhe yokwenza umgudu wokuzama ukukunceda abathengisi nabahamba ngeendlela ngokucwangcisa ngokucwangcisa ikhosi kwiimitha ezide ngokuzicwangcisa kumigca echanekileyo. Oku kuqalwa kwaziwa ngokuba yi-Mercator yokuqulunqa kwaye yasetyenziswa kwimaphu yakhe yehlabathi ngowe-1569.
Kamva ubomi kunye nokufa
Ngowe-1569 nakwi-1570 i-Mercator yaqalisa uluhlu lweempapasho ukuchaza ukudala ihlabathi ngeemephu. Ngomnyaka we-1569 wanyathelisa ukulandelana kwehlabathi ukususela ekudalweni ukuya ku-1568 (i-Encyclopedia Britannica). Ngomhla we-1578 wanyathelisa enye eyayineemephu ezingama-27 ezazisenziwa nguPtolemy ekuqaleni. Icandelo elilandelayo lishicilelwe ngo-1585 kwaye lenziwe ngamaphupha amasha aseFransi, eJamani naseNetherlands. Eli candelo lalandelwa linye ngo-1589 olubandakanya imephu ye-Italy, "iSlavonia" (i-Balkan yamhlanje), neGrisi (i-Encyclopedia Britannica).
UMercator wasweleka ngoDisemba, ngo-2, 1594, kodwa unyana wakhe wancedisa ekuvelweni kwecandelo lokugcina le-atlas ka-ntata yakhe ngo-1595. Eli candelo libandakanya imephu ye-British Isles.
Ukulandela icandelo layo lokugqibela linyatheliswa ngo-1595 i-atlas ka-Mercator yaphinda iphrinta ngo-1602 kwaye kwakhona ngo-1606 xa ibizwa ngokuba yi "Mercator-Hondius Atlas." I-atlas ka-Mercator yinto yokuqala yokufaka imephu yentuthuko yehlabathi kwaye, kunye kunye nokubonakaliswa kwakhe kusekhona njengengenelelo ebalulekileyo kwimida ye-geographie kunye ne-cartography.
Ukuze ufunde kabanzi malunga neGerardus Mercator kunye neprogram yakhe, funda iMark Monmoner's Rhumb Lines kunye neMaphu Yemephu: Imbali Yentlalo ye-Mercator Projection .
Imbali emfutshane yexesha lokuPhonononga
Iimpawu zokugqibela zeBhokisi ezili-100
I-Pros ne-Cons of the MOOCS
I-Quintessential Red Ferrari 308 GTS
Ukutyelela Iifoto kwiKholeji yaseDartmouth
Ibali leMadoda, uFaro wokuqala waseYiputa
Imephu yeVolkswagen Jetta Fuse
Ukwesaba iNkosi kukuqala koBulumko
Iimvumba zezobusika iYule Incense
Imbali ye-Levittown Housing Developments
Ukuguquka kweMelika: Ukungqingwa kweBoston
Ngaba u-Amateur uke aphumelele kwi-US Open?
Ukuhlaziywa kwe-Rockerz® Umfanekiso weBlack Blade Guards
I-Dubitatio njengeSicwangciso soBuchule
Isikhokelo soTitshala kunye noFundo lokuFunda
Ukufumana iiPlayer Correlated Parlays
Imfazwe YaseMerika Yomkhosi: uColonel John Singleton Mosby
Imfazwe Yehlabathi II: USS Massachusetts (BB-59)
I-Golf ye-Nassau igqitha kunye nendlela yokuyithengisa
Hlangana noMikayeli uMikayeli, iNkokheli Yoyise Zonke Iingelosi
U-Henri Matisse Ucaphulo oluthi 'Amanqaku omPheta'
I-Bike Riding e-Destin, eFlorida
Funda ngeenyanga zeNeptune
Yabona ukuba i-Sugar iphi i-Soda